Enda Kune Ruzhinji, Reverse Merger, Ruzhinji Shell Makambani Anowanikwa
Kuenda paruzhinji inongori nzira yekutengesa zvikamu zvemasheya, zvaimboitwa pachivande, kunhengo dzeruzhinji. Maitiro acho akaomarara, akataridzika zvakanaka uye ane zvakawanda zvakanaka, kutora kambani yako paruzhinji:
Inobatsira iwe kukura kambani yako nekukurumidza nekukupa iwe zvimwe zviwanikwa zvemari.
Inobatsira iwe kukwezva uye chengetedza vanhu vepamusoro-notch vane mibairo yakakosha (kuburikidza nesarudzo sarudzo).
Kura kambani yako nekukurumidza nekukwezva ine ruzivo, ruzivo bhodhi revatungamiriri.
Simudza capital nekukurumidza uye nemari shoma.
Kuwedzeresa iyo iwe iwe nevashandisi vako.
Miti inokwidza capital nekugadzira misika yekutengesa inogona kushandiswa kuwana mamwe makambani uye kuita zvirongwa zvekupindirana nemamwe makambani.
Inowedzera yako kukura kwehuwandu nekuwedzera kugona kwako kukwikwidza kumatare makuru.
Tinogona kukurumidza uye zvakanyanya kukwidza kukosha kwekambani yako.
Inoburitsa mari yako pachako mubhizinesi rako nekuita kuti iwedzere kukosha, nokudaro uchiwedzera yako ROI yako pachako.
Inowedzera chimiro chebhizinesi rako nekudaro ichiita kuti zvive nyore kukwezva bhizinesi idzva.
Kana iwe uchitova nekambani yeruzhinji tinogona kubatsira kuwedzera kukosha kwekambani yako uye purofiti uye tikubatsire kuchengetedza zvinhu kubva pamatare.
Ramba uchifunga; hazvisi pamusoro pekuwedzera mari chete. Izvo zvakare nezve kuve nechokwadi chekuti
kambani inofambiswa zvakanaka uye inokwanisa. Iwo ma CEO makuru anoshanda kuti abatsirwe
vagovani. Chengeta kwavo kufarira kwakanyanya mupfungwa uye ivo vanozoziva yako chinangwa uye vanhu vazhinji vachakwezva kune yako sangano. Iwo maonero akareba anokoshesa uye kwete iyo-nguva-imwe yakapfurwa. Iwe unozoda rakarongeka rakarongeka, bhizinesi rine kurongeka bhizinesi uye vanhu vanoziva kuzviita. Kunyangwe iwe uri muUS, Germany, China, Canada kana imwe nzvimbo, tsvaga isu rubatsiro.
Chii chaunoda rubatsiro?
Iwe unoda kuwedzera kutengesa kwako?
Iwe unofanirwa kuchengeta mitengo iri pasi here?
Iwe unoda kutora mamwe mabhizinesi uye unoda kuwana vakanaka vavhoti?
Iwe unoda here chirongwa chiri nani chebhizinesi?
Zvakadini nekushambadzira uye kushambadzira? Kuda rubatsiro?
Iwe unoda here system yakanaka yekutsigira uye runyorwa rwevanhu vanoziva?
Zvakadiniko nezvekudzivirirwa kune vanhu "kupfupisa" sitosi yako?
Unoda kuita bhizinesi nemakambani eS & P 500?
Unoda kuti zita rako risvike kune veruzhinji nenzira inodhura?
Iwe unoda here kuburuka pamashiti epinki uye kusimuka kumusoro mukuchinjana kwakakura?
Heano maitiro ekutanga
Pane urongwa hwaunogona kupihwa mari hweku “enda pachena.”
Visa, MasterCard, American Express uye Discover zvakare inogamuchirwa.
Maitiro acho anogona zvakare kukupa iwe kupinda kune $ 50,000 siginecha chikwereti mukati mezuva rimwe (zvichienderana nekutendera kwemukweretesi) uye,
Yakakura yakawanda chikwereti zvinoenderana nezvinhu uye kubuda kwemari kana yako oparesheni yakakwira uye
Muzviitiko zvakawanda, tinokwanisa kuronga kuti Venture Capitalists ipindure mari yekuenda kuruzhinji zvichienderana nemaonero avo kugona kwemakambani ako.
Kana iwe uchinge watora kambani yako paruzhinji pane timu yese yehunyanzvi iyo yataronongedza kukwidziridza yako nhanho yekubudirira. Kune vanhu vatinoshamwaridzana navo kwenguva refu vatinoshandisa kana vatinoshandisa isu pachedu uye takaita zvakanaka kune mamwe makambani. Heino runyorwa chikamu:
Vanoshambadzira vamiririri vanoziva zvinowana mhedzisiro yepamusoro pamutengo wakaderera.
Vanopa mazano ekushambadzira
Ma maneja manejimendi
Nyanzvi mukubatanidzwa mukutenga
Izvo zvekukubatsira iwe kuvandudza mabhizinesi anoenderana nemakambani eS & P 500
Isu Tave tiri muBhizinesi Kweanopfuura 100 Makore
Zvakaitika zvinoverengeka. Kuenda kuruzhinji chiitiko chakanyanya kurongeka. Saka, iwe unoda kuvimba nevari kukubatsira. Izvo zvakakosha kuti unzwe kuvimba kuti vanoziva iyo ins uye yekubuda kwemaitiro kuburikidza nehukuru ruzivo. Chikwata chedu chinoshanda nekushanda mukati menhepfenyuro yemitemo yekuchengetedza uye yagadzira nzira yakapfekedzwa-zvakanaka kune inopa nekukurumidza uye kunobudirira.
Heano zvakanakira mumwe munhu anosarudza kuenda kuruzhinji:
Inosimudza upfumi uye uremu
Inowedzera kukosha kwebhizimusi.
Zvanyanya nyore kusimudzira capital kana iwe uine kambani yeruzhinji.
Unogona kushandisa stock kubhadhara kune masevhisi akaita sekushambadzira, kusimudzira zvigadzirwa, zvimwe
mabasa uye stock yemamwe makambani.
Zvakanyanya nyore kuwana mamwe makambani - nekutenga iyo kambani ine stock.
Nhau dzekuenda kuruzhinji
Direct Direct Kupa (DPO) inogona kuve yakakosha mikana pamusoro pe IPO. Ne IPO mumwe anofanirwa kuzivisa kuti ingani kambani inokwidza kuburitsa kuburikidza nekutengesa zvikamu. Kana iyo mari isina kukwidziridzwa, mupiro haugone kupedzwa. Nekudaro, neDPO hapana miganho yakafanana uye pane zvakawanda zvinoshandurwa nekuti haudikanirwi kukwidza huwandu hwemari yaunofunga mukupa kwako sekunge uchafanirwa kunge une IPO.
Saka, kana iwe uri kuronga pamusoro kana kufunga nezve kuenda kuruzhinji, uye uchida kuziva zvakawanda nezve iyo kunyoresa SEC inoshanda, kusanganisira ruzhinji ganda kana kusanganisa kubatanidza, zadza fomu kurudyi uye mumwe munhu anokurukura izvi newe. Isu tinogona kuona kuti yakawanda sei iwe yaunoda uye kana iwe uchida kutanga kukwidza capital. Bvunza nezvenzira yekuenda kuruzhinji uye ubvunze nezve kudzoka kubatanidzwa. Rubatsiro runowanikwa pane zvakavanzika zvekuiswa mememo (PPM) zvakare
kuwana mbeu yembeu, kutanga-up capital, vagadziri vemusika, makambani emakomboni uye maitiro ekutora kambani yako pachena. Ruzivo rwekuti ungasimudza sei mari kunge kambani yeruzhinji zviri pamutemo uye zvakanangana zvakare zvinopihwa.
Kana basa rose rapedzwa, bhizinesi rako rinogona kuenda kune veruzhinji uye bhizinesi rako rino, nekudaro, rova ​​kambani yeruzhinji. Isu tinokutora neruoko uye tinofamba newe kuburikidza nekuvhiringidza kosi nhanho-ne-nhanho kuburikidza nekuita kambani inotengeswa pachena. Vashandi vedu vekutsigirwa kwevashandi vanogona zvakare kukuchengeta iwe uchivandudzwa pane maitiro ekuita kudzokorora kubatana nekambani yakatengeswa pachena shell. Mumwe anogona kuenda kune veruzhinji kuburikidza nekudzokorora kubatanidzwa nekambani yeruzhinji shell. Iyo DPO, zvisinei, kazhinji ndiyo yakasarudzwa sarudzo kune vanhu vazhinji.
Enda Kune Voruzhinji Nezvakakodzera Kusimudzira uye Investor Ukama
Ukama hwemushandisi hwakakodzera hune chinangwa chekuita, chinangwa chemitemo, uye rugare rwepfungwa chinangwa. Nekudaro, yedu feni inogona kukubatsira kuti utaurirane zvakanaka nevashandisi uye kusimudzira stock. Kusiyana nemakambani akazvimiririra, kambani yeruzhinji yakanyoreswa mushe zvino inogona kushambadzira yakapihwa pachena kuneveruzhinji.
Nekambani yako yeruzhinji tinogona kukubatsira kutora mari uye kukwirisa mari inoda bhizinesi rako nekukurumidza uye zviri pamutemo.
Tinogona kukubatsira kusimudzira bhizinesi rako kune vateereri vakakura kupfuura zvawaimboita kare.
Unogona kutengesa masheya ekushambadzira masevhisi. Ipapo iwe unogona kushandisa iyi yakanyanya kusununguka kushambadzira uye kuishandisa kuita kuti nyika izive kuti iwe uri yeruzhinji kambani. Vanhu vazhinji vanozoziva nezvewe saka vanhu vazhinji vanotenga kubva kwauri. Izvi zvichakubatsira iwe mukutsvaga kwako kusimudza mari nekuti vazhinji vanoisa mari vanozoziva yako kambani sitendi iripo yekutengeserana.
Iyo Kuenda Kune Veruzhinji Maitiro
Vazhinji vanhu havazivi kujairana paruzhinji. Saka, tinozviita nyore. Nhaurwa dzakadai sekupa pachena kuruzhinji, yekutanga kupa vanhu vanoziva asi vashoma vanoziva ruzivo rwekuti vangafamba sei kusvika ikoko. Chii chinogadzira musika? Unoita sei zvakanaka kudzokere kubatanidzwa? Simudza capital? Kuumba yeruzhinji ganda mubatanidzwa? Iyi ndiyo mibvunzo yatinopindura uye iyi ndiyo masevhisi anogona kupihwa mushure mekufona.
Imwe yematanho ekutanga kupedzisa S-1 kunyoresa fomu uye kuirodha ne
Dziviriro uye Dhivhisheni Commission (SEC). Kana vangobvumidza kunyorera, magwaro anosvitswa neFINRA, iyo Fedha Indasitiri Kunodzora Chiremera. Zvinotarisirwa uye maitirwo ane IPO neDPO maitiro anozobatwa nenzira yehunyanzvi pamwe neruzhinji shell merger maitiro, kutonga 15c211 mafirita uye fomu 8-K. EDGAR, iyo inomira yeElectronics Data Kuunganidza, Kuongorora, uye Kudzorera mafirita yakapera kunyatsoitirwa kuitira kuti kambani yeruzhinji yegumba iumbike, kubatanidzwazve kubatana kunoitika nemazvo uye mari yekutanga kana mari yekukura inomutsirwa zvinobudirira.
Sezvo isu tambotaura pakutanga muchinyorwa, iyo nzira yakasarudzika kazhinji ndiyo DPO (Direct yeRuzhinji Kupa). Ita kutaurirana uye isu tinokwanisa kukupa iwe ruzivo rwemahara pane ino musoro uye maitiro ekuita kudzoreredza kubatana nekambani yeruzhinji shell. Nekudaro, unogona kudzidza kutora kambani yako paruzhinji pasina mari yechinyakare. Uyezve, iwe unogona kuwana matipi ekuti ungatore sei kambani yako kuruzhinji uye nei zviri nyore kwazvo kusimudza capital uchishandisa kambani yeruzhinji kupesana neyakavanzika.
Kusimudzira Mari Yako - Hapana Chiri Nani Kupfuura Nyaya Yakanaka
IPO yakanaka ndeyekutengesa nyaya yako. Chaizvoizvo, kutengesa kwakanaka kunowanzove kwakanaka
kutaura nyaya, haubvumi here? Imwe yematanho ekutanga ndeyekushanda mazuva mashoma pane nyaya. Mhanya nevamwe vanhu. Pashure pacho, pachinzvimbo chekutamba pamusoro pedzimwe pfungwa zvekare, pfuurira kugadzirisa nyaya yako. Vanhu vanotenga nechimiro uye vanoreverera zvisarudzo zvavo zvine musoro. Ive neshuwa yekubatanidza zvese zvinonzwisisika zvinonzwisisika izvo zvinoita pfungwa uye yemanzwiro sizzle iyo inowana mamorekuru emamolekita kufamba. Taura nyaya ichaita kuti vanhu vataure.
Pane nyaya imwechete chaiyo yekuudza boka revangangove maIPO investor: Kambani yako ichaita sei kuti iite ivo mari yakawanda kupfuura iyo inotevera mukomana? Mazhinji makambani emakambani uye mazhinji emabhodhi nhengo anoshandiswa kupa kune vatengi. Asi, ramba uchifunga, kuti izvo zvakakosha kuti mutengi azive uye izvo mushambadzi anoda kuziva zvinowanzove zvakasiyana. Nekudaro, pamusoro pekutaura nezve zvigadzirwa zvako uye zvaunokwanisa kuita navo, kana uchitaura nevanotengesa mari, taura nezve ROI yavo.
Iwe Nyora Nyaya yacho
Iwe unogona kuve nerubatsiro, asi pakupedzisira, nyaya yacho inofanira kunyorwa newe. Iri ndiro CEO kana CFO ibasa. Kudzokorora, vanhu vanotenga nechemumoyo uye vozviruramisa pakutenga nepfungwa. Nekudaro, kana iyo nyaya iri zviviri zvine musoro uye ichibva pamoyo wako, zvobva zvave nerevo yakadzama uye chaiyo kwauri, vateereri vako vachazvinzwa izvi, vanokwanisa kusundwa kuita chimwe chinhu, uye vanogona kururamisa sarudzo yavo.
Takashanda nemakambani maviri aive maviri ari mubhizimusi repamusoro. Mumwe we CEO akaipisa mafuta pakati pehusiku kugadzirira mharidzo inonzwisisika uye nemoyo. Iyo CEO yeimwe kambani yaive nevanhu vekushambadzira vanoita mharidzo. Zvipiriso zvakaunzwa uye zvakatemwa zuva rakaparadzana. Yekutanga, uko CEO aive nemoyo wake mune iyi mharidzo, yakaenda zvakanyanya pamusoro pemutengo waaifungidzira. Wechipiri akagara pasi. Pane chikonzero chakanaka cheizvi.
Kana iwe wakamboona kuedza kwekutanga muTV kunoratidzwa "American Idol," apo vatongi vanoona mumwe achiimba mutambi mushure meumwe, waona kuti Simon Cowell anonyangadza kana mukwikwidzi achipfeka akapfeka chipfeko kana achishandisa imwe gimmick. Vari kutsvaga tarenda kwete hype.
Masangano emacustomer akafanana. Vanogona kuona zvishanu kusvika kugumi zvitsva zvimiro zvekudyara zuva rega rega revhiki. Vakazviona zvese. Mushure mechinguva vanozova vanogunun'una uye vanogunun'una uye vachifanira kurongedza matombo akawanda asina basa kuti awane mashoma egoridhe. Phony hyperbole haibatsire. Iyo kiyi iri mumaminetsi mashoma ekutanga emharidzo yako. Ndipo apo vazhinji vachasarudza kuita sarudzo. Rinenge rakakosha ndiyo yekupedzisira 10-15 maminetsi panguva yemubvunzo uye mhinduro chikamu. Ivo ma investor vanoda kuona kuti unomira sei kana mazano ako achipokana zvinetswa.
Heino mubvunzo unobvunzwa kuti CEO wega wega anobvunzwa munzira: “Chii chako chikuru
Dambudziko? ”Mune mamwe mazwi," Chii chinoita kuti urambe wakarara husiku? "Nzira yakanaka yekupindura ndeyekureurura zvauri kunetseka uye kuita kuti vateereri vazive zvauri kuita kugadzirisa matambudziko.
Mharidzo yako kazhinji 45 maminetsi. Ndiro chete raunaro. Saka, donhedza bhomba uye uvape kupfura kwako kwakanaka mumaminetsi matatu ekutanga. Izvo zvichaita kuti vade kugara kumusoro uye kucherechedza munguva inotevera ye42. Nei wakasiyana?
Heino muenzaniso wakanaka. CEO weimwe kambani iyo yakagadzira ye robotic floor cleaner aitaura neboka revangangoita investimari achiti: "Rega nditange mharidzo yake nemubvunzo, Vangani vanhu pano nhasi vakambogeza pasi?" Munhu wese akasimudza maoko. "Vangani vako voda kuzviita?" Hapana maoko akasimudzwa. "Sa, iwe, kune mamirioni avanhu pasi rose vasingafarire kuchenesa pasi avo. "ABC Robotic ine chigadzirwa kugadzirisa dambudziko iri."
Tinogona kukubatsira iwe munguva pfupi yapfuura maererano neIPO (Yekutanga Ruzhinji Kupa) maitiro, ekudzokorora kubatanidzwa, Mutemo 15c211, Regulation D, kuenda kune veruzhinji uye veruzhinji mafira. Uye zvakare, taura nesu kuti uwane ruzivo pamusoro pePlatifomu Memorandums (PPM), Rule 504, Rule 506, kukwidza mari yekutangisa capitalization, kuchengetedzwa kwemidziyo kubva kumatare, pamwe nekuumbwa kwekambani nyowani muUS nekune dzimwe nyika.
Kune hunyanzvi kune icho. Kukwirisa capital kunogona kunakidza. Tine mepu. Dzidza zvinoitika kana kambani yaenda kuruzhinji uye ona kuti ingakubatsira sei.
Iwe uchadzidza zvakawanda nezvekuti kambani inoenda sei kuruzhinji uye unonzwa wakasununguka kuita sarudzo pane yakakodzera nzira kwauri. Nekudaro, kuti uwane rumwe ruzivo uye tsanangudzo pamwe nenhanho dzekugadzirisa kubatanidzwazve, yeruzhinji shell yekubatanidza kana kutungamira yeruzhinji inopihwa (DPO), fona iyo nhamba iri pamusoro peji ino. Sezvingatarisirwa, hapana chero yeruzivo rwurimo pano runofanira kutorwa semutemo, mutero kana rimwe zano rehunyanzvi. Kana izvi zvichidikanwa masevhisi egweta ane / uye mubhangi anofanira kutsvaga.
Kana wagadzirira kuenda kuruzhinji, bata isu. Isu tanga tichishanda kubvira 1906 uye vanozivikanwa pasi rese sevatungamiriri mukuumbwa kwekambani uye vachienda kuruzhinji.